RIKOOOO MD11 IYO 777 daryaan
RIKOOOO MD11 IYO 777 daryaan sano 3 2 bilood ka hor #599
Waxaan la isticmaalayo Rikooo A330 iyo wonderfull, laakiin dhawaan i isku dayeen qaar ka mid ah waxyaabaha kale sida MD-11 iyo 777
Alaabooyinkaasi waxay sii wadaan inay mar uun ku dhacaan diyaaradda. hadaan sameeyo xoogaa gacanyareyaal ah P3D burburayaan.
Rajaynaynaa in aan ka heli qaar ka mid ah xalka in ay this.
RIKOOOO MD11 IYO 777 daryaan sano 3 2 bilood ka hor #600
Hello waxaa oo soo dhaweynayaa in ay Rikoooo.
Waxaan sidoo kale isticmaali jiray dhammaantood FSX, dhib la'aan. Waa inaad hubisaa in diyaaradaha aad isticmaaleyso ay yihiin kuwo la jaan qaadaya kuwaaga P3D. Markaad furto bogga of, bal aan dhaho-MD-11, waxaad arki doontaa tan: Waayo FSX & FSX-Steam & Prepar3D v1 (v2 & 3 in la tijaabiyo), marka waa inaad hubisaa inay haboontahay.
Just sida uu sheegaayo, v2 iyo v3 si ay u tijaabiso, qaladaad waa suurto gal.
user soo socda (s) ayaa sheegay in Waxaad ku mahadsan tahay: suythe
Time si ay u abuuraan page: seconds 0.167